AFAR Qaab Oo Ay Paul Pogba & Bruno Fernandes Isaga Garab Ciyaari Karaan Shaxda Man United. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
AFAR Qaab Oo Ay Paul Pogba & Bruno Fernandes Isaga Garab Ciyaari Karaan Shaxda Man United.
May 22, 2020 at 14:31 AFAR Qaab Oo Ay Paul Pogba & Bruno Fernandes Isaga Garab Ciyaari Karaan Shaxda Man United.2020-05-22T14:31:25+02:00 CAYAARAHA
Labada ciyaaryahan ee Manchester United Paul Pogba iyo Bruno Fernandes ayaa Door muhiim ah ka ciyaari doona qaab ciyaareedka Man United inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer France ee ku guulaystay koobka adduunka iyo xiddiga reer Portugal ayaan wali iska garab ciyaarin sabab la xidhiidha dhaawac uu qabay Pogba iyo waliba joojintii la joojiyay premier League sabab la xidhiidha xanuunka Korona laakiin waxa ay haatan fursad u haystaan in ay iska garab ciyaaraan marka dib loo bilaabo horyaalka premier League.
Red Devils ayaa seddex dhibcood ka dambeysa kooxda kaalinta afaraad ee Chelsea iyadoo 9 kulan u dhimanyihiin labada kooxood xilli ay ku tartamayaan kaalmaha loogu soo boxo champions League.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in ay labada xiddig ee khadka dhexe iska garab ciyaari karaan waliba guulo la gaadhin karaan kooxda Man United.
Hadaba wargayska Daily Star ayaa soo saaray 4 wado oo ay xiddigaha Paul Pogba iyo Bruno Fernanades isaga garab ciyaari karaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
3 Daafac ah:
Hadii ay Man United ku ciyaarto 3 daafac ah waxa ay fursad weyn siinaysaa in ay xiddigaha Fernanades iyo Pogba iska garab ciyaaraan waliba waxa ay horay u riixi karaan kubada marka ay haystaan weerarkana si deg-deg ah u keenaan.
Awooda daafac ee Scott McTominay & Pogba ayaa Fernandes siin doonta xoriyad uu ku taageero xiddigaha weerarka ee Daniel James iyo Marcus Rashford.
4-2-3-1 ayaa ah shax ay Man United ciyaartay kulamo badan xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay Fernandes ayaana ka caawin kara in uu qaab ciyaareed fiican ka soo saaro xiddiga Paul Pogba.
Xiddiga reer Portugal ayaa leh awood caawin iyo dhalis waxana uu muujiyay tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda waxana uu si weyn u caawin karaa xiddigaha weerarka ee James, Rashford & Anthony Martial.
4-3-3 waa shax Solskjaer u ogolaan karta in uu ciyaarsiiyo dhamaan xiddigaha weerarka uga ciyaara kooxdiisa inkasta oo ay dhimayso awooda daafac ee kooxda
Fernandes & Pogba ayaa ka hor ciyaari kara xiddiga khadka dhexe ee Fred kaas oo ilaalin doona xiddigaha daafaca ee Harry Maguire iyo Victor Lindelof.
Waxa la arki doonaa sida ay labada xiddig ee khadka dhexe isku caawiyaan marka ay garoonka ku jiraan laakiin waa mid uu tababaruhu isku dayi doono.
Waa shaxda loo yaqaano Diamond waana shaxda 4-4-2 taas oo Solskjaer u suurtagalanuasa in uu isticmaalo dhamaan xiddigaha khadka dhexe uu ku haysto kooxda.
Nemanja Matic ayaa ku bilaaban doona khadka dhexe si uu u ilaaliyo daafacyada taas oo McTominay, Pogba and Fernandes fursad u siinaysa in ay horay u socdaan oo ay caawiyaan xiddigaha Rashford & Martial.
« “Erling Håland wuxuu gaari karaa heerka Ronaldo” – Rivaldo
La Gazzetta dello Sport oo baahiyay qorshaha Arthur, inuu is baddelay go’aankiisa iyo halka ay marayo wadahadalka Juventus iyo Barcelona »